.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Windows7Logon Background Changer
ဒီ ဆော့ဝဲလ်လေးက Windows7မှာWindow စတက်တဲ့အချိန် ပေါ်တဲ့ နောက်ခံပုံကို ပြောင်းပေးတာပါ။ ပုံတွေလည်း
အများကြီးပါ ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်စက်ထဲက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း ပြောင်းသုံးလို့ ရပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 776 KB ပဲ ရှိတာဆိုတော့ ကြိုက်တယ်ဆို အောက်မှာ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ..
Download: Windows7Logon Background Changer
Posted by Thurainlin at 06:20
Labels: Computer, Software, Wallpaper